Banned by Mugabe, Play About Gukurahundi Massacres Finally Staged – Nile Post
Zimbabwean actors perform on stage in a production of "1983 - The Dark Years", a play once banned by Robert Mugabe, that relives the horrors of a government crackdown on rebels loyal to political rival Joshua Nkomo in the mid-1980s, that rights groups say killed 20,000 civilians, in Harare, Zimbabwe, May 31,2018. Picture taken May 31, 2018. REUTERS/Philimon Bulawayo
The now president, Emmerson Mnangagwa, was Mugabe’s security minister at the time and many say he played a big role during the Gukurahundi massacres – making the play’s airing, just months after he took power, even more significant.
When a reporter in February visited Sawudeni, a village west of Harare where some of the killings took place, villagers said they wanted Mnangagwa and Mugabe to apologise publicly and compensate the families of victims.
“In my opinion we have been parking the issue of Gukurahundi for a very long time,” said Davis Guzha, executive director at the theatre company that brought the show to Harare.
“If anything, because the president keeps talking about ‘Zimbabwe is open for business,’ let’s discuss everything.”
Tags: GukurahundiGukurahundi MassacresMnangagwarobert mugabeZimbabweZimbabwe history
Zimbabwe will re-introduce a local currency "in less than 12 months", after using the US dollar and regional currencies since...
Suspected gas cylinder explodes in bus, kills 42
Policy makers should be empowered to have effect